Ọkachamara ọkachamara na ezumike na-emepụta Ngwá Ọrụ Weebụ Weebụ Web
Iwepụ ma ọ bụ wepụ ọdịnaya sitere na ibe weebụ dị iche iche bụ ọrụ nchịkọta data maka ulo oru ntanetị na ndi mmepe weebụ. Ọ bụ ezie na ị na-ekpuchi ọtụtụ narị puku ngwa ngwa, ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume ịhọrọ software kacha mma weebụ nchapu. Otú ọ dị, ị ghaghị ịnwa ịchọta ngwá ọrụ kachasị mma na kachasị mma nke ga-azọpụta ma oge gị na ego gị.
N'ebe a, anyị nwere ndepụta nke ngwá ọrụ ntanetị ndị a ma ama.
A na-emepụta ya site na Ipswitch Inc.. Ọ bụ ndọtị maka ihe nchọgharị weebụ dị iche iche. iMacros nwere ike ịgbakwunye ihe ndekọ, rụọ ọrụ ọrụ ugboro ugboro na-enye anyị ohere weghara ọrụ weebụ dịka nbudata, nbudata, ule nke ihe oyiyi na ederede. Ọzọkwa, ọ na-enyere mbubata na mbupụ data ma ọ bụ faịlụ gaa ma site na ngwa weebụ site na iji faịlụ XML, PHP na CSV. Ọ na-echekwa data bara uru maka anyị na nchekwa data ya ma ọ bụ ebe ọzọ akọwapụtara. Ihe omume a na-enye anyị ezigbo ụlọ ọrụ ntanetị ego na-enyere aka na nyocha ọrụ weebụ.
Ọ bụ Import.io Corporation na-emepe ya ma kwalite ya. Bubata..ọ bụ otu n'ime ihe omume kachasị mma ma ọ bụ ndị a ma ama na ntanetị weebụ. Ọ zuru oke maka ma ndị mmadụ ma ụlọ ọrụ ma na-ahapụ ndị ọrụ na-ewegharị ibe weebụ n'ime API na naanị clicks. Ọzọkwa, import.io na-eme ka ọ dị mfe maka ndị mmepe weebụ na onye mmemme iji wepụ data sitere na ebe nrụọrụ weebụ chọrọ. Nkà na ụzụ ya pụrụ iche na-enye ndị ọrụ ohere ịchekwa data na usoro akọwapụtara n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Scrapebox bụ ngwá ọrụ SEO bara uru na n'efu nke ndị freelancers, ndị mmepe na SEO ụlọ ọrụ na-eme n'ụwa niile. Ọ na-enyere aka na ebe nrụọrụ weebụ na blọọgụ na-enweghị ihe ọ bụla, na njirimara ya bụ ndị na-ewe ihe nchịkọta engine, ndị na-ewepụta mkpụrụ okwu, ndị nchịkọta ihe nnọchiteanya, akwụkwọ akụkọ, na ndị na-enyocha ya. Ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị a ma ama na-elebanye anya na peeji nke, mepụta ndepụta RSS, wepụ email, chọta ngalaba na-edeghị aha, na ndị ọzọ. Scrapebox nwere ike ime ihe dịka SEO onwe gị ma mee ka ọrụ gị rụọ ọrụ site na URL. Ọ ga-eme nchụso asọmpi, rụọ njikọ, mee nyochagharị ebe obibi ma mee ọtụtụ ihe maka gị n'enweghị ebubo ọ bụla.
Nlekọta bụ otu n'ime ihe kacha mma weebụ. Omume a dị ka usoro ntanetị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma dị elu ma jiri ya wepụ nhazi na usoro ndị a na-adịghị ahazi. A pụkwara iji ya maka nhazi ozi, ntanye data ahụ, na ịmepụta ebe nchekwa akụkọ ihe mere eme. A maara onye na-amaghị mma maka nkwado ya na-enye aka wepụ data site na HTML na XML isi. Ọzọkwa, nkwado ya na-eme ka anyị gbanye na arụmọrụ anyị site na iji akara ngosi na akọwapụta API.
Mozenda Inc. mepụtara ma zụọ ihe omume a. Ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma na-eji arụ ọrụ weebụ ma mee ka ọ dị mfe anyị weghara ọdịnaya site na ọtụtụ saịtị. Ọ na-ahazi data anakọtara ma kewaa ya dị iche iche na-adabere na anyị chọrọ na atụmanya. Ngwongwo nchekwa nchekwa igwe ojii a na-eme ka echekwaa faịlụ anyị maka ndị ọrụ ntanetị na ndị ọrụ ntanetị. Ọ bụ ihe ziri ezi ma dị mfe iji usoro nke na-abịa na nchebe dị ala, na-ekwe nkwa data ziri ezi, na-eme ka anyị lekwasị anya na nchịkọta ahụ, ma nyekwaa mbipụta mbipụta dị mfe na a pụrụ ịdabere na ya. Fọpụtara faịlụ ahụ na-abịa n'ụdị dịka CSV, Txt, XLS, na ndị ọzọ Source .